बीबीएलः पिटिए सन्दीप, एकै ओभरमा दिए २४ रन! – Everest Dainik – News from Nepal
बीबीएलः पिटिए सन्दीप, एकै ओभरमा दिए २४ रन!
२०७६, ६ माघ सोमबार
काठमाडौंः अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल) अन्तर्गत सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध आफ्नो तेस्रो ओभरमा सन्दीप लामिछाने महँगा सावित भएका छन् । मेलबर्न स्टार्समा आवद्ध उनले आफ्नो तेस्रो ओभरमा बिनाविकेट २४ रन दिन पुगे ।
सन्दीपले यो ओभरमा ३ छक्का र १ चौकासहित २४ रन दिएका हुन् । तीन ओभर बलिङ गर्दा उनले आज २ विकेट लिएर ३८ रन दिएका छन् ।
वर्षाका कारण आज खेल १४ ओभरमा झारिएको छ । मेलबर्नले आज टस जितेर बलिङ रोजेको हो । जारी सिजनमा सन्दीपले १० म्याचमा १२ विकेट लिएका छन् । जारी प्रतियोगितामा उनीआवद्ध मेलबर्नले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ । गत सिजन उपविजेतासमेत रहेको मेलबर्नले ११ म्याच खेल्दा १० खेलमा जित हात पारेको छ । र, उसले तालिकामा २० अंक बटुलिसकेको छ ।
मेलबर्न तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा सिक्सर्स तेस्रो नम्बरमा छ । उसले ११ म्याच खेल्दा ६ खेलमा जित हासिल गरेको छ । र, सिक्सर्सले १३ अंक बनाएको छ । मेलबर्न यो सिजनमा पनि ब्याटिङ अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेल र सिक्सर्समा मोइसेस हेनरिक्स कप्तान रहेका छन् । सिक्सर्समा टम करन, जेम्स विन्स, नाथन लायनलगायत स्टार क्रिकेटर छन् ।
सिक्सर्सविरुद्ध मेलबर्नको प्लेइङ ११– मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट, निक म्याडिन्सन, ग्लेन म्याक्सवेल, सेबास्टियन गोच, निक लार्किन, जोनाथन मर्लो, क्लिंट हिन्चलिफ, डानियल वरवल, लान्स मोरिस र सन्दीप लामिछाने ।
ट्याग्स: बिग बास लिग, बीबीएल, सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध मेलबर्न स्टार्स
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच छलफल, के विषयमा भयो कुराकानी?
बाँदर धपाउन ४० लाख रुपैयाँ
ललितपुरको बालकुमारीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु